German Colors | Kudzidza ChiGerman, Kudzidza ChiGerman
musha » Mashoko echiGerman » German Colors
Muchikamu chino chine mavara echiGermany, tichadzidza mavara muGermany Tichaona maGermany mavara neTurkey, uye dzidzai kuti tingati sei mavara ezvinhu, zvinhu nezvimwe zvinhu muchiGermany.
1 German Colors
2 ChiGerman Mifananidzo Yakaratidzwa
Mutsara mutsara ne 3 German Colors
4 German Mutauro Mutauro Mutsara
Nyaya yemisara yeGermany inowanzobva pakuyeuchidza uye zvakakwana kugadzirisa nomusoro mavara eGermany anowanzojairika muupenyu hwezuva nezuva .. Mazita, mavara, maumbirwo, nhamba, nzvimbo, nzvimbo nezvimwe. Bhuku rebhuruu, Red ibhoon, Hot tea, Big table, Fast fast, Migwagwa yakawanda mumitsara yakaita seBlue, Red, Hot, Yakakura, Yakakurumidza, Mashoko akawandisa zvipikiso.
Izvi zvinoreva kuti mavara ane zvipikiso zvakare.
Nokudaro, hatingazosimudziri mavambo apo painyorera maGermany mavara mumutsara.
Takaona mune zvidzidzo zvedu zvekare kuti tingashandise sei zvirevo muchiGermany zvirevo uye kuti tingashandise sei pamberi pezita rechiGermany.
Zvino ngationei mavara eGermany neTurkey ari patafura:
dunkelblau zvikepe zvitema
gehena Zvakanaka, zvakajeka
hellrot Chiedza Dzvuku
dunkelrot Rima tsvuku
weinrot claret dzvuku
Iye zvino tava kukupai iwe mufananidzo wedu muGermany mavara:
Illustrated German Colors
German gehena Izwi rinosvinudzwa rinoreva, dunkel zvinoreva kusviba.
Kana tikati marara akajeka, somuenzaniso kana tichiti bhenu gehena kuratidza kuti rima. dunkel Tinoshandisa shoko.
hell hell: light blue
gehena grün: Chiedza chemavara
dunkel grün: Girazi
gehena gehena: tsvuku tsvuku
Dunkel tie rod: Rima tsvuku
Muenzaniso mutsara nezvemaGermany mavara
Zvino regai tione zviratidzo zvatakagadzirirwa iwe uye muenzaniso wezvirevo pamusoro pemisara yeGermany:
Mumufananidzo uri pamusoro, mutsara weDas ist ein Apfel ishoko rechirevo.
Der Apfel is grün pasi pemufananidzo iri mutsara wechirevo chinoreva ruvara rwechinhu chacho.
Ngwarira mutsauko uye musiyano pakati pemutauro wechirevo uye chirevo chechirevo.
Mumufananidzo uri pamusoro apa, mutsara Das isin e Knoblauch ndiyo mutsara wechirevo.
Der Knoblauch ndiro weiß pasi pemufananidzo iri mutsara wechirevo chinoreva ruvara rwechinhu chacho.
Mumufananidzo uri pamusoro, mutsara Das isine Tomate pamusoro apa ndiyo mutsara wechirevo.
The Die Tomate is rot clause is an adjective clause inotaura chivara chechinhu chacho.
MuchiGermany, mavara kana zvimwe zvigadziro zvezvinhu zvinotaurwa achishandisa muenzaniso unotevera, sezvinoratidzwa mumifananidzo iri pamusoro apa:
ChiGerman Chirevo Chirevo Chinyorwa
ZITA + IST / SIND + COLOR
Muchirevo chepamusoro, tinoona shandisi / siri mubatsiri weropa sezvinongova mune zvinyorwa zvisinganzwisisiki uye sevasina muzvirevo zvakawanda.
Iye zvino, tichishandisa purogiramu iri pamusoro, tichanyorera mimwe mienzaniso miviri uye tapedza chidzidzo cheGerman chemavara.
Das Auto ist rot: Mota yakatsvuka
Das Auto ist gelb: Motokari yakatsvuka
Die Blume is gelb: Maruva akachena
Die Blumen sind gelb: Maruva akachena
KUFUNGA IZVI: Miedzo yeGermany
Mavara eGermany uye kushandiswa kwemavara mumutsetse zvakafanana nepamusoro.
Unogona kunyorawo mitsara yakasiyana-siyana nemisara yakasiyana uye zvinhu uchishandisa purogiramu iri pamusoro.
Tichafara kufara mazwi ako, mazano, zvikumbiro uye mibvunzo pamusoro pemisara yeGermany mundima yekunyorera iri pasi apa.
Best chido chekubudirira ..
TAGS: Nhamba dzeGermany kusvika ku100, German 9. kirasi yebhuku, German mavara mavara, German mavara mavara, German Colors, Mijeremani mavara neTurkey, German Turkish colors, Colors muGermany, Colors German, German ye mivara, Shona Shona Shona Colors